Fiidiyow: #Socialnomics 2014 | Martech Zone
#Socialnomics 2014 by Erik Qualman waa qeybtii shanaad ee taxanaha fiidiyowga ee loogu daawashada badan yahay Baraha Bulshada. Fiidiyowga sanadkan wuxuu muujinayaa culeyska muhiimka ah ee u dhexeeya bulshada, moobiilka iyo qaraxii isticmaalka kunkii sano.
Ma lihin xulasho in aan samayno baraha bulshada. Xulashada ayaa ah sida ugu wanaagsan ee aan u sameyno. Erik Qualman
Hal qodob oo muhiim ah ayaa ah in 20% ereyada lagu qoro bar raadinta waligood lama baarin kahor - taageerida baahida loo qabo barnaamijka suuq geynta waxyaabaha adag ee isku dhafan ee maqaallada, sawirrada, fiidiyowga, kaqeybgalka bulshada iyo warbaahinta kale ayaa la soo saaray lana wadaagay. Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin inay joogaan halka ay dhagaystayaashoodu ku sugan yihiin - taasina waxay u baahan tahay cabir iyo kala duwanaansho.
Erik Qualman waa # 1 qoraaga ugu iibinta fiican iyo khudbad muhiim ah oo ku saabsan hoggaanka dhijitaalka ah. Fiidiyowga waxaa soo saaray Istuudiyaha Equalman. Xogta ilaha ee tirakoobka fiidiyowga waxaa laga heli karaa buugga Socialnomics.
Tags: aqoonyahan ericcilmiga bulshada
Smartcards oo Isdaba Joogaya Sannadaha Soosocda ee Soosocda